Trump awood ma u leeyahay in uu dib u dhigo doorashada Mareykanka? |
Trump awood ma u leeyahay in uu dib u dhigo doorashada Mareykanka?
Madaxweyne Donald Trump ayaa markale buuq siyaasadeed ka abuuray gudaha dalka Mareykanka kadib markii uu bartiisa Twitter-ka iyo aqalka cad ba uu ka sheegay in aysan suurtagal ahayn in doorashada Mareykanka ay xilligeeda ku dhacdo.
Trump ayaa ku baaqay in dib loo dhigo doorashada, waxaana uu intaa raaciyay in xaaladda hadda lagu jiro aanay suurtagalineyn in doorasho ay ka dhacdo Mareykanka.
Mar uu ka hadlayay Aqalka Cad ayaa Trump waxaa uu sheegay in dadka oo ku codeeyaa boostada ay keni karto in wax isdaba marin ay hareyso doorashada.
Wuxuu codsaday in doorashada aan la qabanin ilaa inta ay shacabka suurtagal uga noqoneyso “inay si nabad ah ku codeeyaan”.
Haseyeeshee baaqaas kasoo yeeray waxaa kasoo horjeedsaday xisbiyada Dimuqrdaaiga iyo kan uu katirsan yahay ee Jamhuuriga.
Madaxweyne Trump ayaa in muddo ahba waxaa uu ku andacoonayay in codeynta boostada ay keni karto wax isdaba marin dhanka doorashada ah.
Inta badana gobolada Mareykanka ayaa dadku waxay ku codeyn doonaan boostada iyagoo guryahooda jooga, maadaama ay taagan tahay khatar fayraska corona, si looga baaqsadana ay keentay in dadku ay ku codeyaan boostada.
Balse ma jiraan caddeymo muuqda oo muujinaya in wax isdaba marin ay hareyn karto doorashada iyo codeynta boostada, haseyeeshee madaxweynaha waxaa uu ku adkeysanayaa in uu cabsi ka qabo hannaanka codeynta iyo bad-qabka doorashada oo uu sheegay in aanan looga maarmeyn in dib loo dhigo doorashada.
Madaxweynaha dib ma u dhigi karaa doorashada?
Sida uu dhigayo sharci la ansixiyay sanadkii 1845, doorashada Mareykanka waa in ay dhacdaa afar sano walba kadib. In wax ka badel lagu sameeyo xeerka doorahsada Mareykanka waxay u baahan tahay in labada aqal ee Mareykanka ay intooda badan isku raacaan wax ka badelka doorashada.
Aqalka Kongreska ayaa waxaa ku badan xisbiga Dimquradiga, taas oo adkeeneysa in uu meel maro soo jeedinta Trump.
Inkastoo ay adag tahay in uu meel maro qorshaha Trump, haddana dad badan waxay isweydiinayaan sida fayraska corona uu u saameyn doona doorashada Mareykanka iyo qaabka looga baaqsan karo dhibaatao ka dhalata doorashada, maadaama corona uu wali ka taagan yahay Mareykanka.
Waxaan shaki ku jirin in fayraska uu saameyn doona habsami u socodka doorashada.
Sida uu qabo barafasoor Richard L Hasen, oo ka tirsan jaamacadda California ee dalka Mareykanka, madaxweyne Trump iyo barasaabyada gobolada waxay adeegsan karaan awood degdeg ah oo ay ku xadidaan dadka badan ee ku codeynaya goobaha codbixinta.
Muddo xileedka Trump ayaa ku eg 20-ka bisha Janaayo ee sanadka 2021, balse waa in doorasho ay dhacdaa bisha Nofembar, si inta u dhaxeysa looga si shaqeeyo caleema saarka qofka guuleysta.
Haddii dib loo doorto Trump, waa uu sii wadanayaa balse haddii laga guuleysta oo uu Biden kusoo baxo, waxaa ay noqoneysaa in dhamaadka Janaayo uu xilka wareejiyo.
Falcelintii ka dhalatay hadalka Trump
Dad badan oo isugu jira siyaasiyiin iyo guddiga doorashada Mareykanka ayaa ka hadlay hadalka kasoo yeeray madaxweyne Trump.
Ellen Weintraub, oo ah haweeneyda guddoomiyaha ka ah Guddiga Doorashada ee Federaalka, ayaa sheegtay in Mr Trump uusan awood u lahayn tallaabo uu ku baddalo karo waqtiga doorashada.
Waxay intaas ku dartay: “Isagu u uma dhigi karo, mana aha in dib loo dhigo doorashada.”
Waxay dalbatay in dhaqaale dheeraad ah la siiyo gobollada, si ay tabar ugu yeeshaan inay codbixinta doorashada qabtaan. “Dhammaan dadka Mareykanka waxay doonayaan doorasho amni ah oo aan wax khatar ah lahayn,” ayey tiri.
Siyaasiyiin ka tirsan xisbiga Dimuqraaddiga ayaa sidoo kale dhaliilay soo jeedinta madaxweynaha.
Senator-ka gobolka New Mexico, Tom Udall, ayaa sheegay in “aysan jirin wax sababi kara” inuu madaxweynaha dib u dhigo doorashada.
Xubnaha sarsare ee xisbiga Jamhuuriga ayaa waxay ka soo horjeedsadeen soo jeedintii madaxwayne Donald Trump ee ahayd in dib loo dhigo doorashada Mareykanka ee bisha November.
Hogaamiyaha aqlabiyada aqalka Sanetka Mitch McConnell iyo hogaamiyaha xubnaha laga tirada badan yahay Kevin McCarthy ayaa labaduba ka soo horjeedsaday fikirka ah in doorashada dib loo dhigo.
Gogaysa :Goobaha Waxbarashada Waxa Lagu Fadhiisan Jiray Dhagaxaan Iyo Daasado,…
Daawo Bulshada Arabsiyo Ee Gobolka Gabiley Oo Ka Mahadceliyay Rajooyin…